Boorso gaar ah oo loo yaqaan 'Pvc Bag', Bacda Wejiga Al-tolan ee aan Daran, Boorsada Cudurka - Si buuxda
Bacda aan guntin
Kuwa haysta kaararka
Haysta kaararka caaga ah
Warshaddeenna ku taal Qingdao, u dhaw dekedda iyo garoonka diyaaradaha, gaadiid ku habboon.
Waxaan u fidinay macaamiisha adeegyo lagu qanco oo ku saleysan koox aad u fiican, jawaab deg deg ah iyo tikniyoolajiyadda horumarsan.
Had iyo jeer waxaan si adag u kormeernaa alaabada kahor intaan la keenin si aan u hubinno inaan soo bandhigno alaabo tayo sare leh.
Boorso aan tol lahayn oo ah PVC
Boorsada kulul ee warqadda PVC ee gogosha
Boorso PVC oo leh badhanka dabacsan
Boorsada PVC oo leh boodhka
Qingdao Fulinta Xirmooyinka Co., Ltd. waxay ku yaalliin Qingdao, oo ku takhasustay boorsada pvc, boorso aan tol lahayn, boorso tolmo leh, sanduuq harag ah, warqad warqad ah, sanduuq warqad ah, boorso daabacan, bac qaas ah, iwm.
Qingdao Fulinta Xirmooyinka Co., Ltd.
Telefoon: 0086 156 66686664
Ganacsiga jasiiradaha jasiiradda ah “stabi…
Soo dejinta iyo dhoofinta, dhoofinta, dhoofinta iyo tilmaamayaasha kaleba si aad ah ayey u soo hagaageen, ganacsiga shisheeye ee Qingdao wuxuu muujiyey isbadal xoog leh "xasilinta iyo hagaajinta". Sida laga soo xigtay wararkii ugu dambeeyay ...
Alaabooyinkayadu waa wanaagsan yihiin
Halkan waxaan ka aragnaa in bacaha aan xirxiran yihiin ay ka fiican yihiin qalabka kale ee boorsada gacanta, iyadoo aan loo eegin qiimaha ama aragtida wasaqowga deegaanka, intaa waxaa dheer, Nylon, shiraaca, Oxford, iwm. Agabkan ayaa ka badan ...
Waa maxay sababta ay bacaha aan toli lahayn loo xardhay?
Bacaha waxaa loo isticmaalaa maalin kasta nolosheena. Mid ka mid ah bacaha ugu caansan uguna caansan ayaa ah boorsada gacanta. Marka hadda waxsoosaarayaal badan ayaa fiiro gaar ah siiya qalabka iyo qaababka loo sameeyo bacda qarnigan. Maxuu yahay ...
Dhibaatooyinka waa in fiiro gaar ah la siiyaa ...
Hada bacaha dhoobada ah ayaa si weyn loogu adeegsadaa eco-saaxibtinimo iyo dib loo cusbooneysiin karo, oo lagu soo saaro dhar aan xirnayn oo ah maaddada cayriin ee ugu weyn. Sidaa daraadeed, baahida loo qabo bacaha aan xirnayn ayaa sii kordhaya sanadba sanadka, iyo inbadan oo ...
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan Xuquuqda Aad ayaa Leedahay. Tilmaamaha - Alaabada kulul - Khariidadda - AMP Mobile
Haysta Kaarka , Haysta kaararka caaga ah, Corrugated Box ,